Interview - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
ကျွန်တော်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင် လို့ မြင့်မြတ်ကိုတွဲခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
Original Gangster လည်း အောင်မြင်ခဲ့သလို အပြင်မှာပါ တွဲ ဖက်ညီညီ မြင်တွေ့ရတာက သရုပ် ဆောင် မြင့်မြတ်နဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေးပါ။
Written by	Olive	 21 December 2018
John Lwin နှင့် Interview
Q.Hero နဲ့ Zero ....
A.Hero ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်း မှာ ကမ္ဘာကျော်Hero ကြီးတွေရှိ တယ်။ အဲဒီ Hero တွေလည်း တစ် နေ့ကျတော့ ကျရှုံးကြရမှာပဲ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်တော့ ထိ၊ သိ၊ သတိနဲ့ အမြဲတမ်းရှိဖို့လိုတယ်။ လက်လွတ် စပယ် မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ် Zero ပြန် မဖြစ်ဖို့ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ နေထိုင်ပါတယ်။
Written by	NTZ 20 December 2018
လူဖြစ်နေရတာကိုက ဒုက္ခလို့ မြင်မိတယ်
Q. ခုချိန်မှာ အများဆုံးရင်ဆိုင် နေရတဲ့ Stress & Pressure...
A. ခုလောလောဆယ်တော့MTV တွေ ရိုက်နေတော့ ပိုက်ဆံ တော်တော်ကုန်နေတယ်။ အဲဒီ ဖိအားပဲရှိတယ်။ ကိုယ်က ငါးဆယ် လောက် တည်ထားပေမယ့် ခုနစ် ဆယ်လောက်ကုန်သွားတယ်။ ကိုယ် က အစစအရာရာ အရမ်းကောင်း အောင် သေချာလုပ်တော့ တစ်ပုဒ် တည်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ သုံးပုဒ်ဆို တော့ တော်တော်လေး ခေါင်းကိုက် နေပါတယ်။
Written by	ရွှေရင်ငြိမ်းအေ	 17 December 2018
သရုပ်ဆောင် ဒီရေ နှင့် Interview
Q. ကိုဒီရေမှာ မောင်နှမ ဘယ် နှယောက်ရှိလဲ။
A. မောင်နှမ ငါးယောက်ရှိပါ တယ်။
Q. အစ်ကိုက မန္တလေးသားဆို တော့ မန္တလေးအစားအစာ ဘယ် ဟာကြိုက်လဲ။
A. မန္တလေးက အစားအစာ အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မန္တလေးမှာပဲ ရနိုင်တဲ့ မြန်မာမုန့်စစ် စစ်တွေကို သဘောကျပါတယ်။
Written by	မုိးအလကၤာ(ျမင္းၿခံ)	 17 December 2018
To & From - မေတိုးခိုင်
Q. အစ်မရေ မင်္ဂလာပါ။
A. မင်္ဂလာပါ ညီမလေး
Q. အစ်မမှာ မွေးချင်းမောင်နှ မ ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။
Written by	8Days Journal	 14 December 2018